पूर्वसचिव कार्की प,त्नीमाथि गर्थे यस्तो शं,का – नयाँ तथ्य खु,ल्दै « Dhankuta Khabar
पूर्वसचिव कार्की प,त्नीमाथि गर्थे यस्तो शं,का – नयाँ तथ्य खु,ल्दै
काठमाण्डौं । डेढ साताअघि पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना सानेपा हाइटस्थित घरभित्रै मृ,त फेला परिन् । घटना अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका केही नयाँ तथ्यसहित प्रहरीले विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ग,म्भीर प्रश्न छ – कामदार विजय एक्लैले त्यो काम कसरी गरे ? नाइलनको पा,सो लाग्दा डो,री चुँ,डिई भुँ,इमा ब,ज्रि,एर विजयले प्रा,ण त्या,गे भनिएको छ । सबैभन्दा ग,म्भीर अनुसन्धानको पाटो त यो छ कि, सिसिटिभी फुटेजमा विजयले मुनामाथि टाउकोमा निरन्तर हा,नेको देखिन्छ तर एउटा जि,उँदो मान्छेलाई कसैले नीलो प्लास्टिकको पिर्काले हा,न्दा ज्या,न जान्छ कि जाँदैन ? प्लाष्टिकको पिर्काकै भरमा त मान्छे बे,होस पनि हुँदैन, र,क्तमु,छेल हुनु टाढाको कुरा ।
अनि २३ वर्षको युवकले ४८ वर्षकी महिलालाई पछाडिबाट डो,रीले क,सेर ल,डा,उन र एक्लै घाँ,टी थि,चेर मा,र्न कत्तिको सम्भव होला ? त्यसरी नै नियत खराब गर्दा मा,रिन लागेको मान्छेले चू,पचाप घाँ,टी थापेको पक्कै थिएन । होह,ल्ला, रो,दन, चि,त्का,र वा हा,रगुहा,र गरिएको हुनुपर्छ ।
त्यत्रो ह,ल्ला हुँदा छिमेकी कहाँ थिए ? यदि त्यस्तो ह,ल्ला भएन भने निर्मला पन्त प्र,करणमा झैं भो,कल क,र्ड (घाँटीबाट आउने आवाज) अ,वरोध गरिएको हुनुपर्छ । तर, त्यो काम एक्लो मान्छेबाट, त्यसमा पनि त्यो विषयको तालिम वा ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुन सक्दैन । प्रहरी अनुसन्धानको अकोए पाटो छ, घ,टना हुनुभन्दा एक महिनाभित्र पूर्वसचिव कार्की, मृ,तक मुना र कामदार विजयको मोबाइलमा भएका संवाद, एसएमएस आदान–प्रदानको विवरण, जुन आउने क्रममै छ ।
कार्कीले घरको सिसिटिभी फुटेज आफ्नो मोबाइलमा हेर्ने गरी ज,डान गरेका थिए । घरमा पत्नी भए नभएको ? को आयो, को गयो ? जस्ता सबै कुरा आफ्नै मोबाइलबाट हेर्थे । विजयको पछिल्ला दिनको मानसिक परिवर्तनप्रति कुनै आ,शंका थियो कि ! वा त्यस दिनको स्थिती के हो ? विजय पछिल्लो समय घर सरसफाइ गर्ने कामदार मात्र सीमित थिएनन् , उनकी मुनाका व्यक्तिगत ड्राइभर पनि थिए ।
अपराज महाशाखाबाट अनुसन्धानरत एक प्रहरीले जनआस्थालाई भनेका छन्, ‘धा,रि,लो ह,ति,यार वा बि,स्फो,टक प,दार्थ (ब,न्दुक) को प्रयोगबाट गरिएको ह,त्या थियो भने एक्लो सं,लग्नता पत्यारिलो हुन्थ्यो। तर मुनाको ह,त्या सहजै प,त्यारिलो छैन, जसरी दुनियाँ अझै पनि दरबार ह,त्या,का,ण्डमा बाबु, आमासहित काका, फूपू र भाइबहिनीलाई दीपेन्द्रले मा,रेको भन्नेमा अझै विश्वस्त छैन।’ प्रहरीले कम्तिमा पनि मुनाको १३ औँ पुन्यतिथिका दिनसम्म घ,टनाका थप तथ्य बाहिर नल्याउने नीति बनाएको छ। यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।